မှားဖျက်မိတဲ့ဖိုင်များကို ပြန်ရှာနည်းများ ~ Windows,Internet,Browsers,Social Networks,Softwares
9:44 PM Windows Tips And Tricks No comments
Shift + Delete နဲ့ ဖျက်မိလို့Recycle Bin မှာလည်း ရှာလို့ မတွေ့ တော့တဲ့ဖိုင်တွေကို ပြန်ရှာဖို့ နည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ဒီဆောင်းပါးမှာမှားဖျက်မိတဲ့ဖိုင် ၊ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဖိုင်တွေကို အောင်မြင်စွာပြန်ရှာနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေကို ရေးပေးပါမယ်။
သင်ရှာနေတဲ့ဖိုင်မတွေ့ တော့တာဟာ တကယ် ဖျက်မိတာလား ၊ နေရာထားမှားသွားတာလားဆိုတာ အရင်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။Recycle Bin ထဲသွားပြီး ဖိုင်ကို ပြန်ရှာပါ။ဖိုင်တွေ များပြားနေရင် Right Click နှိပ်ပြီး Sort By>Date Deleted နဲ့ Filter လုပ်ပြီးရှာရင် ပို လွယ်ကူပြီးမြန်မြန်ရှာတွေ့ နိုင်ပါတယ်။
နေရာထားမှားသွားတာကို ပြန်ရှာဖို့Windows Explorer ကနေ သင်ဖိုင်ကို သိမ်းထားတဲ့ Drive အောက်ကိုသွားပြီး Search Box ကနေ Drive တစ်ခုလုံးမှာပြန်ရှာပါ။
တကယ်လို့ သင့် ဖိုင်တွေကို Dropbox, Google Drive, or SkyDrive တို့ လို Cloud Storage မှာသိမ်းတတ်တဲ့သူဆိုရင် အဲဒီမှာပြန်ရှာပါ။ရှာမတွေ့ ရင် Trash ထဲမှာရှာနိုင်ပါသေးတယ်။Trash ကလည်း Cloud Storage ရဲ့Recycle Bin တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
စက်ပစ္စည်းတွေဟာ ပျက်ဆီးတတ်တာကြောင့် သင့်ရဲ့ အရေးကြီးဒေတာတွေကို မှန်မှန် Backup လုပ်ဖို့အကြံပေးပါတယ်။သင် ဟာ Backup လုပ်ထားသူတစ်ယောက်ဆိုရင် တော့ Backup မှာပြန်ရှာပါ။
Windows မှာ Backup Tools တွေ ပါရှိပြီး Windows7မှာ ပါရှိတဲ့ Previous Version tool ကဖိုင်တွေကို ပြန်ရှာဖို့ လွယ်ကူပါတယ်။မှားဖျက်မိတဲ့ဖိုင်ရဲ့ဖိုဒါပေါ်မှာ Right Click နှိပ်ပြီး Properties ကိုနှိပ်ပါ။Previous Versions tab မှာ Backup တွေကို တွေ့ မြင်နိုင်ပြီး Open ကိုနှိပ်ပြီးရှာပါ။
Windows 8 ရဲ့File History feature ကို အသုံးပြုရင်လည်း ဖိုင်တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူပြန်ရှာနိုင်ပါတယ်။မှားဖျက်မိတဲ့ဖိုင်ရဲ့ ဖိုဒါကို သွားပြီး History button ကိုနှိပ်ပြီးပြန်ရှာပါ။
အပေါ်ကနည်းတွေ သုံးပြီးသင့်ဖိုင်တွေကို ရှာမတွေ့ ဘူးဆိုရင် File Recovery Software တွေသုံးပြီးရှာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့ Drive အမျိုးအစားပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။အများဆုံးအသုံးပြုတဲ့ Drive တွေကတော့ Hard Disk Drive(HDD) or Magnetic Hard Drive တွေ ဖြစ်ပြီး Solid State Drive တွေကတော့ အသုံးပြုမှုနည်းပါတယ်။သင့်ကွန်ပြူတာရဲ့Hard Drive ကဘာအမျိုးအစားလဲဆိုတာ Manufacturer Specification မှာကြည့်ပါ။
HDD မှာဖိုင်တွေကို Pointers တွေနဲ့ ညွှန်ပြပါတယ်။Pointers တွေက အဲဒီဖိုင်ရဲ့ ဒေတာအစနဲ့ အဆုံးနေရာတွေကို မှတ်သားညွှန်ပြတာပါ။HDD မှာ ဖိုင်တစ်ခုကိုဖျက်လိုက်ရင် ၀င်းဒိုးက အဲဒီဖိုင်ရဲ့Pointer ကို ပဲဖျက်လိုက်တာဖြစ်ပြီး အဲဒီနေရာကို Free Space အနေနဲ့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒေတာတွေကို တော့ မဖျက်ပစ်သေးပါဘူး။အဲဒီအတွက် ဒေတာတွေကို တစ်ခြား ဒေတာတွေ Overwrite မလုပ်ခင် File Recovery Software တွေ နဲ့ အမြန်ပြန်ရှာနိုင်ပါတယ်။အမြန်ပြန်မရှာဘဲ တစ်ခြားဒေတာတွေ Overwrite လုပ်သွားရင်တော့ ပြန်ရှာလို့ မရတာတွေ၊ တစ်ဝက်တစ်ပျက်ပဲပြန်ရှာလို့ ရတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
SSD မှာဖိုင်တစ်ခုကို ဖျက်လိုက်ရင် TRIM command ကို သုံးပြီး အဲဒီနေရာကို အပြီးဖျက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် Recovery Software တွေသုံးပြီးပြန်ရှာလည်းမရနိုင်တော့ပါဘူး။modern solid-state drives တွေ နဲ့Windows7and 8 စတဲ့ OS တွေ မှာ TRIM ကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ရှေးကျတဲ့ SSD တွေနဲ့Windows XP မှာတော့ TRIM ကို Support မပေးပါဘူး။အဲလို အခြေအနေမှာတော့ သင့်ဖိုင်တွေကို Recovery Software တွေ နဲ့ ပြန်ရှာနိုင်ပါတယ်။
အန္တရာယ်အကင်းဆုံး နဲ့ အောင်မြင်မှုအရှိနိုင်ဆုံးနည်း။
သင်ဖိုင် တစ်ခုကို မှားဖျက်မိလိုက်တာသိသိခြင်း ပဲ ကွန်ပြူတာကို ပိတ်ပါ။မပိတ်ဘဲ File Recovery Software တွေ ကို အင်စတောလုပ်မယ်ဆိုရင် အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို ပဲ Free Space အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ သင့်ဖိုင်တွေကို Overwrite လုပ်ပြီးအပြီးတိုင် ပျက်သွားနိုင်ပါတယ်။အင်စတောလုပ်ပြီးသား Software တွေ Background မှာ Run နေတဲ့ Programsတွေကလည်း သင့်ဖိုင်တွေကို Overwrite လုပ်ကောင်းလုပ်သွားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက်သင့်ကွန်ပြူတာကိုပိတ်ပြီး Driveကိုစက်ကဖြုတ်ပြီးတစ်ခြားစက်တစ်လုံးမှာ Secondary Drive အနေနဲ့တပ်ဆင်ပြီး Recovery Software တစ်ခုခု နဲ့ရှာပါ။ ဒီနည်းက သင့်ဖိုင်တွေကို ပြန်ရဖို့ အန္တရာယ်အကင်းဆုံးနဲ့အောင်မြင်မှုအရှိနိုင်ဆုံးနည်း ပါ။
အမြန်ဆုံးနည်း ဒါပေမယ့် စွန့် စားရမယ့်နည်း။
ဖျက်မိတဲ့ဖိုင် က အရေးမကြီးတဲ့ဖိုင်ဆိုရင် အမြန်ဆုံးပြန်ရှာဖို့File Recovery Software တွေကို သုံးနိုင်ပါတယ်။Freeware တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Recuva ကို ဒေါင်းပြီး အင်စတောလုပ်ပါ။Recuva နဲ့Drive ကို Scan လုပ်ပြီးဖိုင်ကို ပြန်ရှာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ဒီနည်းကို သုံးရင် သင့်ဖိုင်တွေကို ပြန်ရဖို့ မသေချာပါဘူး။ Recuva ကို အင်စတောလုပ်တဲ့ အခါ ဖျက်လိုက်မိတဲ့ဖိုင် ရဲ့ဒေတာတွေအပေါ်ကို Overwrite လုပ်သွားနိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီး တစ်ခြား Run နေတဲ့ Programs တွေ ၊ Background မှာ Run နေတဲ့ Programs တွေကလည်း Overwrite လုပ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဖျက်မိတဲ့ဖိုင်ဟာ သင့်အတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ ဖိုင်ဖြစ်ပြီးအပေါ်ကနည်းတွေ နဲ့ ပြန်ရှာလို့ မတွေ့ ရင် စက်ကိုပိတ်ပြီး Professional Data Recovery Services တွေဆီကိုပို့ လိုက်ပါ။အဲဒီ Services တွေ Dying Hard Drive, Overwrite ဖြစ်သွားတာတွေကို ပါပြန်ရှာပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ဒါပေမယ့် အာမတော့မခံပါဘူး။အဲဒီ Services တွေရဲ့ ဝန်ဆောင်ခ ဟာ ကြီးမြင့် ပြီးနိုင်ငံခြားမှာတော့ ရှိပါတယ်။ဒီမှာတော့ မသိပါ။
သင့်ရဲ့အဖိုးတန် ဖိုင်တွေ မပျက်ဆီးစေဖို့ 
သင့်ရဲ့ အဖိုးတန် ဖိုင်တွေ မပျက်ဆီးစေဖို့အမြဲတမ်း Backup လုပ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ Windows Backup Tools တွေကို သုံးနိုင်သလို တစ်ခြား Software တွေကိုလည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။Cloud Storage တွေ မှာလည်း သင့်ဖိုင်တွေကို သ်ိမ်းပြီး Backup လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Myanmar ICT မှာကျွန်တော်ရေးသားထားသောဆောင်းပါးကို ပြန်လည်မျှဝေပါသည်။
Dropbox ကဖိုဒါတွေကို Tree View အနေနဲ့ သုံးလို့ ရမ...
သိချင်တာတွေကို လွယ်လွယ်ရှာဖို့Kikin for Chrome
Facebook မှာ GIF တွေ Share လို့ ရပြီ။
Facebook မှာ Shared Photo Album တွေတင်မယ်။
Facebook အကောင့် Hack မခံရအောင်ကာကွယ်ပေးမယ့် FB Ph...
Virus တွေကို အမြန်ဆုံးရှင်းပေးမယ့် Bitdefender 60-...
Facebook ရဲ့News Feed ကို Organize လုပ်နည်း။
ဖုန်းလာရင် Voice Command နဲ့Accept,Reject လုပ်ပေ...
သင်နှစ်သက်တဲ့ ၀က်ဆိုက်တွေ ကို Desktop App ပြုလုပ်...
မမြင်စေချင်တဲ့ Program Windows တွေကို ဖွက်ထားပေးမယ...
သုံးချင်တဲ့ဆော့ဝဲရှာမတွေ့ ဘူးလား? AlternativeTo မှ...
Browser မှာသိမ်းထားတဲ့ Password တွေမေ့သွားလား ? We...
Firefox ကို Reset ချရင်ဘာဖြစ်မလဲ?
Android Phone ကနေ Passwords တွေခိုးရတာလွယ်လွယ်လေးပ...
YouTube မှာ Full Length Movie တွေကို ရှာပေးနိုင်တဲ...
Google Chrome မှာကြည့်နိုင်မယ့်ဖိုင်လေးမျိုး။
သင့် Android Phone ရဲ့CPU,RAM,Network,Disk Usage...
Facebook မှာ သူငယ်ချင်းတွေမသိအောင် Relationship St...
Chrome ကို Reset လုပ်မယ်။
Android Phone က ကြော်ညာတွေကို ဖျောက်ပြီး ကွန်နက်ရှ...
Android Phone တွေမှာ Wake ဖြစ်ပြီးအလိုလိုမီးထလင်းတ...
Windows Programs တွေကို အမြန်ဆုံး Speed နဲ့Runေ...
Metro Wallpaper Pack For Windows 8
Multitask လုပ်လို့ ရလာတဲ့ YouTube V 5.0.21
သင့် Android Phone မှာ Malware ရှိမရှိဘယ်လို သိနို...
Microsoft Word 2013 ရဲ့AutoRecover အချိန်အပိုင်း...
Android Device တွေမှာ သီချင်းတွေ တူတူနားထောင်မယ်။
YouTube ကို အမြန်ဆုံး Load လုပ်ပေးနိုင်တာ Chrome ပ...
Premier League Live 2013/2014 (Android & iOS)
Web Application အနေနဲ့ အသုံးပြုလို့ ရတော့မယ့် CCle...
Windows ရဲ့Activity တွေကို ပြပေးမယ့် LastActivit...
Dropbox မှာ Direct Download Link ရယူပါ။
Internet Security Suite တစ်ခု ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ခြင...
YouTube TV : YouTube ကို TV Version နဲ့ ကြည့်မယ်။
Facebook မှာ သင်ရှာထားသမျှကို သူများမသိအောင်ဖျက်ပစ...
Windows 8 ရဲ့Start Screen က Microsoft App များကိ...
Windows 8 ရဲ့Desktop Programs တွေအတွက် Custom Ti...
MPT Service V1.0.0 (GSM ဖြစ်ဖြစ် CDMA ဖြစ်ဖြစ် ငွေ...
Windows 8 မှာ Internet Explorer 10 ရဲ့Default Se...
Facebook ကို Window စတိုင် နဲ့အသုံးပြုလို့ ရမယ့်...
YouTube က Video တွေကို မထစ်ဘဲနဲ့ ကြည့်မယ်။
CheapCast : Online Video ,Music ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင...
PhotoSpeak: 3D Talking Photo v2.2.7 apk download
ငွေဖြည့်ကတ် အမြန်ထည့်ချင်သူတွေအတွက် Android App
ပိတ်ထားတဲ့ဆိုက်တွေကိုကြည့်ဖို့PirateBrowser
Browser တွေရဲ့Memory အသုံးပြုမှုကို လျှော့ချပေးန...
Windows 8/8.1 ရဲ့Start Screen ကို Disable လုပ်ပေ...
Windows 8 ရဲ့Start Screen ကို Reset ပြုလုပ်ခြင်း...
Voice Message ပါပို့ လို့ ရလာတဲ့ WhatsApp
The File Converter v.3.2(Android)
Cloud Storage ကဖိုင်တွေကို Move/Backup လုပ်ပေးမယ့်...
Samsung Galaxy S4 မှာပါတဲ့ Air Gestures ကို အသုံြး...
Easy Backup (Android)
သင့် English Skill ကို စမ်းသပ်ပေးနိုင်တဲ့ Typo !
iExplorer V. 3.2.3.3
Microsoft Word ဖြင့် Image ပုံတစ်ပုံရဲ့Backgrou...
YouTube Video တွေကို Floating PopUp Player အနေနဲ့ ...
ဖိုင်တွေကို ပုံမှာဖွက်ထားပေးနိုင်တဲ့ Steganography...
သင့် Gmail က Images,Attachments တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူ...
ဓါတ်ပုံရိုက်ရင်း အသံပါသွင်းနိုင်တဲ့ CamVoice
Contacts + : Social Contacts တွေကိုပါမှတ်ထားမယ်။